Humni addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti bobbaafameeraa? - BBC News Afaan Oromoo
Humni addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti bobbaafameeraa?
24 Bitooteessa 2021
Tibba kana ibsa Addi Bilisummaa Oromoo baase dabalatee odeessaaleen miidiyaa hawaasaa humni addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa seenuun miidhaa geessisaa jiraachuu eeru.
Loltoonni Eertiraa naannoo Oromiyaa seenaniiru jechuun kanneen barreessanillee jiru.
Lola naannoo Tigraay keessatti sarbama mirgoota namoomaan wal qabatee komiin kan irratti ka'u humni addaa naannoo Amaaraa fi loltoonni Eertiraa naannicha keessaa akka bahan Ameerikaan irra deddeebiin gaafataa turte.
MM Abiy Ahimad Kibxata paarlaamaa irratti yoo dubbatan humna addaa naannoo Amaaraa akka humna badii fi weerartuutti ilaaluun sirrii miti jedhan.
Mootummaan humna kana gara fedhetti bobbaasuuf mirga akka qabu eeruun Ameerikaan humni kun naannoo Tigraay keessaa haa bahu jechuun fudhatama hin qabu jedhan.
Ofii humni addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa jiraa?
Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)n Wiixata darbe ibsa baaseen hidhattoonni naannoo Amaaraa maqaa seera kabachiisuu fi nagaa eegsisuu jedhuun naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti bobbaafamuu hime.
Hogganaan biiroo bulchiinsaafi nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammad dhimma kanarratti gaaffii BBCn dhiyeesseef yoo deebisan; erga yeroo dhiyoo as Oromiyaa bakka adda addaatti rakkoon nageenyaa mul'atu dabaluu himu.
'Yakki loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti raawwatan fudhatama hin qabu'
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhattootaanis ta'e jaarmiyaa siyaasaa gurmaa'een uumamu furuuf mootummaan naannichaa humna nageenyaa isaatti fayyadamee hojjetaa jira jedhan.
''Kanaan achi humni hidhatee bakka biraadhaa dhufe kan Oromiyaa keessa socho'u hin jiru" jedhan.
Akka Obbo Jibriil jedhanitti humni addaa naannoo Amaaraa kutaalee Oromiyaa tokko tokko keessa seeneera kan jedhamu 'soba'.
"Biyya sirna federaalizimiin bultu akka Itoophiyaa kana keessatti caasaan nageenyaa naannoo tokko dhimma naannoo kaanii keessa akkamiin seena?" jechuun gaafatu aanga'aan kun.
"Yoo rakkoon humnaa olii jiraatellee humna nageenyaa federaalaati malee kan seenu, hidhattoota naannoo biraa miti. Kanaaf humni addaa Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa gale hin jiru, seerri ittiin galanis hin jiru,'' jedhan.
Madda suuraa, Marsaalee Hawaasaa/Facebook
Loltuu Eertiraa lola Walloo irratti ajjeefame jedhame marsaalee hawaasaa irratti qoodamaa ture
Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa saba Oromoo keessatti uumame hordofee loltoonni Eertiraa garasitti bobbaafamuu marsaalee hawaasaa irratti dubbatamaa ture.
Suuraan waraqaa eenyummaa loltuu Eertiraa tokkoo kan lola kana keessatti ajjeefame jedhamees bal'inaan 'twitter' fi 'facebook' gubbaa qoodamaa ture.
Haa ta'u malee loltuun waraqaan eenyummaa isaa qoodame kun wayita ammaa biyya Siwiidin kan jiraatuu fi hojii loltummaarra akka hin jirre, waraqaan eenyummaa isaas fuula 'facebook' isaarraa kan fuudhame ta'uu BBC'n odeeffateera.
Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa kan uumaa jiru humna wagga dhibba hacuucee bituusaa dhaadatuu fi ammas humnaan bituu barbaadu, humna harcaatuu TPLF fi garee siyaasa gadi aantummaa hordofuudha jedhu Obbo Jibriil.
Paartileen mootummaan morkatan filannoo dhiisanii ba'uun rakkoo nageenyaa hammeessuu mala soda jedhus kaasan.
''Filannootti deemaa jirra. Paartileen dorgoman filannoo dhiisanii ba'an jiru. Isaan kunneen filannoo danquu malu.
"Warrumti dorgomus bakka garaagaraatti rakkoo nageenyaa uumuun akka waan mootummaan dadhabee fakkeessuun hanqina mootummaa mul'isuu barbaadu'' jedhu.
Ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa humna nageenyaa qabutti fayyadamee rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiru furuuf socho'aa jira jedhan.
Abiy Ahimad: 'Yakki loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti raawwatan fudhatama hin qabu'